Mmekọahụ Mmekọahụ Oge 3: Datebọchị Mwepụta, Nkesa, Trailer Na Ihe Anyị Maara - 【Nkọwa】
Mmekọahụ Mmụta oge 3: ụbọchị ịhapụ, nkesa, ụgbọala na-adọkpụ na ihe anyị maara
Nkuzi | 0 Comments
Otu n'ime ihe kacha mma sitere na Netflix ka emegharịrị ọhụrụ - Mmekọahụ Ed Oge 3 na-aga n'ihu, ma ugbu a, anyị ga-echere maka ụbọchị ọ ga-ewepụta ya. Nyere na mmekorita nke nwoke na nwanyị na oge nke 3 dị ugbu a n'ihi nsogbu ahụike ụwa, ọ bụ ezie na atụmatụ dị maka nloghachi na Ọgọstụ, anyị na-atụ anya ka onye egwuregwu Britain hụrụ n'anya nke ukwuu laghachi na 2021.
Ntọala n'ime obodo nlekọta Welsh mara mma, agụmakwụkwọ gbasara nwoke na nwanyị na-enyocha ndụ, ịhụnanya na njikọ mmekọahụ nke ụmụ akwụkwọ, ndị nne na nna na ndị nkuzi. N'ime oge abụọ mbụ, ihe odide nke usoro ahụ na-etolite n'ụzọ nkasi obi, ebe Mmụta Mmekọahụ na-enyocha ọtụtụ isiokwu dị nro na-elebara anya nke ọma.
N'okpuru, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Mmekọahụ Mmekọahụ oge 3, gụnyere ụbọchị ọ ga-ewepụta ya, ihe nkedo ahụ, ebe anyị chere na akụkọ ahụ ga-esote. Ndi Otis mechara kwusi igbu oge ma merie obi Maeve? Ndị na-apụnara mmadụ ihe na-esochi ya.
1 Mmekọahụ Ed Season 3 Hapụ Forebọchị amụma: 2021?
2 Mmekọahụ Ed Season 3 Trailer: A Peek Peek nke Ihe Ex Ga-atụ Anya N'afọ Na-abịa
3 Mmekọahụ Ed Season 3 Cast: Arenye Ka Anyị Na-eche
4 Mmekọahụ Mmekọahụ Oge 3 Akụkọ: Ihe anyị na-atụ anya site na usoro na-esote usoro
5 Nke a bụ otu n'ime ihe ngosi kacha mma na Netflix
Mmekọahụ Ed Season 3 Hapụ Forebọchị amụma: 2021?
Anyị na-atụ anya ụbọchị ntọhapụ maka oge 3 nke Mmekọahụ Ed ga-abụ mmalite 2021, dabere n'ogologo oge ịgba egbe ugbu a metụtara nsogbu ahụike. Oge na-agwụ maka ịse vidio na 2020 dị ka a ghaghị ịgbanye ihe nkiri ahụ n'ụbọchị kachasị ogologo n'oge ọkọchị Britain. Agbanyeghị, enwere ike ịmaliteghachi na August, dị ka Deadline na Eleven si kwuo, ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na-egosi ihe nkiri ahụ, mana ọ dị ka Netflix ga-eme mkpebi n'ọnwa a iji zere nnukwu oge na Oge 3.
Nke, dị ka Oge ikpebi, na-egosi na ọ bụ ikpe. Ọ ghọtara na Sony na ndị na-eme ihe ngosi ahụ na-enwe ọganihu na nkwadebe iji laghachi na eserese ma na-emepe usoro iwu dị mkpa. Ndị na-eme ihe nkiri ga-edebe ụbọchị ọdee nke August na akwụkwọ akụkọ ha.
Nke a na - eme mgbe gọọmentị Britain nyere ikike ka eweghachite telivishọn na eserese ihe nkiri na Mee 2020, ma ọ bụrụhaala na ndị nrụpụta etinyela atụmatụ nchekwa zuru oke. Agbanyeghị, kọntaktị dị mkpa na nzuzo nke Mmekọahụ Ed ga-enwerịrị dịka akụkụ nke ngosi ahụ ga-eweta isi ọwụwa maka Eleven.
Ọ bụrụ na Netflix na-anọgide na-agbaso usoro ihe ngosi ya ugbu a maka ihe ngosi ahụ, nke, n'ihi mmeri nke ọkwa ya, ọ dị ka ọ ga-ekwe omume, anyị na-ebu amụma na oge 3 ga-ahapụ na Jenụwarị 2021. Nkọwapụta nkọwa ka dị oke ụkọ, mana Production Weekly nwere nke atọ Oge edepụtara na usoro mmepụta nke 2020 na-adịbeghị anya maka Mee, yabụ usoro nhazi ahụ dị ntakịrị.
Mmekọahụ Ed Season 3 Trailer: A Peek Peek nke Ihe Ex Ga-atụ Anya N'afọ Na-abịa
Ka anyị kwuo gbasara mmekọ nwoke na nwanyị, ka anyị kwuo maka oge nke atọ (gbasara Mmụta Mmekọahụ) pic.twitter.com/qvRIiXwp3B9 Febụwarị 10
N'ụzọ dị mma, Netflix yiri ka ọ ghọtara nke ọma otu akpịrị na-agụ agụụ Mmekọahụ Mmekọahụ gbasara ihe nkiri ahụ, onye iyi ahụ kara ọkwa nke mmeghari oge nke 3 na ụgbọala na-adọkpụ. Dị ka nke mbụ ụgbọala na-adọkpụ maka oge 2, nke Gillian Anderson nyefere otu okwu sultry na uru nke mmekọahụ, onye isi oche Aristair Petrie, Groff, na-akọghachi oge Teaser 3.
Anyị na-ahụ onye isi nwayọ na-agbachi nkịtị na-agagharị n'ụlọ nzukọ nke Moordale High, na-agafe eserese nke isi ihe gbasara Mmekọahụ Ed ka ọ na-ele ihe ọdịnihu ga-adịrị onye ọ bụla n'ime ha. The teaser agwụ na akwụkwọ ịkpọ òkù ịmụtakwu banyere mmekọahụ ed oge 3, ma-agwụ tupu a kwesịrị ekwesị tọhapụ ụbọchị.
Mmekọahụ Ed Season 3 Cast: Arenye Ka Anyị Na-eche
Ọ bụ ezie na enwetabeghị ndepụta ndepụta maka oge atọ, anyị ji n'aka na anyị ga-eche na ihe odide ndị egosipụtara na vidiyo teaser ga-alaghachi.
Usoro a 'na - eduga Asa Butterfield (Otis Milburn) na Gillian Anderson (Dr. Jean Milburn), yana akụkụ dị mma nke ndị na - akwado nkwado, ọkachasị Emma Mackey (Maeve Wiley), Ncuti Gatwa (Eric Effiong). ), Connor Swindells (Adam Groff) na Patricia Allison (Ola Nyman). N'iburu ịdị arọ nke oge 2 na akụkọ zuru ezu, ọ ga-esi ike iche n'echiche nloghachi ihe nkiri ahụ na-enweghị ọtụtụ ndị nkedo weghara ọrụ ha.
Anderson tweeted banyere mmekọahụ ed oge 3 na ụbọchị ọhụrụ (rịba ama usoro ndị dị n'uko dị n'elu ya):
Ka ahụ oge n'adịghị anya ?? @ sexeducation S3 pic.twitter.com/sdONgVmzVQ10 Febụwarị 2020
Mmekọahụ Mmekọahụ Oge 3 Akụkọ: Ihe anyị na-atụ anya site na usoro na-esote usoro
N'ajụjụ ọnụ LADbible, Nunn na-atụle usoro ihe omume ngosi ahụ siri ike, na-achọpụta na usoro nke ide oge ọzọ tupu mmeghari ohuru a na-ahụkarị bụ otu esi arụ ọrụ telivishọn. Mgbe ajụrụ ya gbasara ike akụkọ ga - eme n’ọdịnihu, Nunn kwuru, sị, “Ọ masịrị m ịde mkpụrụ edemede ndị a. Ọ bụ usoro magburu onwe ya ma echere m na isiokwu ngosi a, n'ihe gbasara mmekọahụ na mmekọrịta, na-enye akụkọ na-adịghị agwụ agwụ nke ohere.
Mmekọahụ edere oge 2 wepụrụ site na uche ya na Otis ma họrọ ịhọrọ ịgbazinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge dị ukwuu nye ndị mmadụ mara mma dị iche iche gbara ya gburugburu. Eric (Gatwa), akara ngosi ọhụụ kachasị ọhụrụ na ịntanetị, eritela uru kachasị na ngbanwe a na usoro ngosi ahụ, na-enye ohere maka nhụjuanya na mmetụta na-emetụ n'ahụ nke mgba nke nwa nwoke queer ojii na-eto eto. O doro anya na ewu ewu ya na-enweghị ịdọ aka ná ntị, dị ka vidiyo nke teaser maka oge nke atọ na-elekwasị anya na ọ ga-eme ka mmekọrịta ya na onye nweburu ya ike Adam.
(Ebe E Si Nweta Foto: Sam Taylor)
N'ezie, Eric abụghị naanị nwa akwụkwọ nwere ịhụnanya na ụbụrụ ya. Oge na-adịghị oge "ha ga-ọ bụ, ọ bụghị ya?" agba egwu n'etiti Otis na Maeve (Mackey) yiri ka ọ na-aga ime. Ọnọdụ ikpeazụ nke esemokwu nke oge abụọ hụrụ Otis kwupụtara ịhụnanya ya nye Maeve na ozi olu, naanị maka mmasị ịhụnanya Maeve tupu ọ nụ ya.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ Fans katọrọ akụkọ a dị ka mgbakwunye nke agwa ịhụnanya ugbu a, onye isi ihe nkiri ahụ na-ezere mmeghachi omume ọ bụla. Na mkparịta ụka ya na BT, Ben Taylor kwuru "Echere m na a ga-atụba akpụkpọ ụkwụ na ihu. Na ezi ụzọ. M hụrụ n'anya ịbụ ndị iberibe ihe. I chere na ị chọrọ ya, ma ị chọghị ya.
Enwere ọtụtụ ụmụ nwoke ndị ọzọ nwere nkwado na-akwado ka a chịkọta ha n'oge nke 3 nke Mmekọahụ Ed. John na-ejedebe oge nke abụọ site na iji obi ekele ọhụrụ maka mmekọrịta mmetụta uche ya na onye mmekọ ya Jakob ugboro ugboro, n'ihi ọbụbụenyi ya na nne Adam gbara alụkwaghịm ọhụrụ, Maureen. N’ebe ọzọ, ụmụ akwụkwọ dị iche iche na-agba mgba banyere mkpughe banyere njirimara na ọnọdụ ha n’ụwa ka ha na-eche eziokwu nke trauma metụtara mwakpo mmekọahụ, njirimara na-enweghị isi, na atụmanya na-abịanụ maka ọdịnihu.
Nke a bụ otu n'ime ihe ngosi kacha mma na Netflix
Na-ekwu okwu na Hollywood Reporter banyere ihe ọhụrụ na usoro ahụ, Nunn nwere obi ụtọ banyere ebe ya na ndị edemede ya nwere ike ịdọrọ na eclectic cast. Ihe odide a ... nwere ụkwụ. Echere m na m nwere ike ịmekwu ihe na ha ma ọ bụrụ na anyị nwere ohere, "ka o kwuru. "[Netflix] na-akwado ma na-achọ n'ezie ka anyị kọọ akụkọ ndị anyị nwere mmasị na ya. Ọ dị ka anyị niile n’otu peeji, na-achọ ime otu ihe ngosi. »
Ọ bụ atụmanya na-enye obi ụtọ maka ngosipụta mejupụtara ọtụtụ ndị ntorobịa dị iche iche n'ihu na n'azụ igwefoto. O siri ike ịhụ ihe kpatara mmekọahụ jiri metụta Fans nke ukwuu. Ọ na-enye nlebara anya na enweghị nkatọ banyere nsogbu ndị ọ bụghị naanị ndị nọ n'afọ iri na ụma na-eche ihu, kamakwa site na ọtụtụ ndị toro eto na-anakwere mmekọahụ nke ha. Ihe ederede Nunn dị ọcha n'ụzọ doro anya, usoro ihe nkiri ahụ gụnyere ya nnukwu mgbakwunye na ọbá akwụkwọ Netflix na-eto eto nke akụkọ na mgbasa ozi na-aga n'ihu.